Estonia · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Estonia
Albania05 Aogositra 2012
Polonina: Fanambarana Iombonan'ny Zanaky ny Web
Alemaina01 Marsa 2012
Tantara mikasika ny Estonia
Nahazo aingam-panahy tamin'ny lalan'i Baltika 1989, nanao ny rojon'olombelona ny mpanao fihetsiketsehan'i Hong Kong hitakiana ny fahafahana sy ny demaokrasia
Azia Atsinanana 29 Aogositra 2019
"Nanavatsava fotoana sy toerana ny fahazavan'ny fahafahana. Tena mamirapiratra. #StandwithHongKong #BalticWay [Miaramijoro amin'i Hong Kong, Lalan'i Baltika]"
Iran: Bilaogera manoratra boky momba ny fiantraikan'ny aterineto
Cyrus Farivar dia bilaogera, mpanao gazety sady mpanoratra monina ao Etazonia. Manoratra boky momba ny fiantraikan'ny aterineto eo amin'ny fiarahamonina izy ankehitriny. Manoratra momba ny fiantraikan'ny aterineto ao Iran, Senegaly, Korea Atsimo ary i Shipra.
Filoha Estoniàna Mampitandrina Amin'ny ”Fibodoan'ny tena ihany”, Fandrisihana Fiderana Ary Ny Fihodinana Ara-politika
Letonia 07 Janoary 2018
Nizarazara be ny fanehoankevitra any ivelany momba ireo tenin-dRtoa filoha manohitra ny toetsaina nasionalista mikatom-baravarana, manakona ny laharam-pahamehany : ny revolisiona teknolojika sy ny fanatontoloana ny asa.
Fampielezankevitra Mampididoza ao Makedonia Mikendry ireo Masoivoho Tandrefana
Eoropa Andrefana 10 Mey 2017
"Misy vokany mampididoza ny fankahalàna vahiny, sa tsy izany? Noho izany, atsaharo ny fanelezana azy io!"
Rosia 06 Mey 2017
Izao Tontolo Izao Araka Ny Fomba Fijery Rosiana Mahazatra
Afrika Mainty 22 Novambra 2016
Tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra, nanamarika tampoka ny fanohanany ilay lalàna federaly vaovao natao mba hanazavana ny faneken'ny governemanta ofisialy "ny firenena Rosiana" i Vladimir Putin.
Ratsy Vintana Ny Mariazin'ilay Rosiana Biraokraty Miliaridera
Rosia 22 Janoary 2014
Niteraka onja indray ny asa an-tserasera nataon'ilay Bilaogera mpitari-dalana amin'ny ady amin'ny kolikoly ao Rosia, Alexey Navalny, tamin'ny randra-tariham-pilazana mamely an'i Maxim Liksutov, lehiben'ny departemantan'ny fitaterana ao Moskoa.
Amerika Avaratra 27 Desambra 2010
Midika hoe 'mody an-trano' ny Krismasy ho an'ny olona maro - nefa rehefa tsy mety izany, dia mety ho fampaherezana ihany koa ny mikarakara sakafo mahagaga. Nizara ireo nahandro fialan-tsasatra tena tiany ireo mpitoraka bilaogy manerana ny kaontinana maro. Miaraka amin'ireo, afaka manonofy ianao miverina an-tanindrazana na mitsidika toerana izay tsy mbola hitanao koa aza. Fa maninona ianao no mankalaza ny Krismasy amin'ity taona ity, ary inona no harosonao?